Tirinta ereyada - Khadka Internetka - Ereyga Kumbuyuutarka
Xisaabinta ereyga ayaa caan ku ah dadka lacagta lagu siiyo qorista. Dukumiintiyada tacliinta badankood waxay leeyihiin xaddidaad dherer ah, ha noqoto 1,000 ama 80,000 oo eray. In kasta oo ay jiri karaan xaddidmo sadarrada ama bogagga, waxa ugu caansan waa in lagu cabbiro noocyada carqaladahaan ereyada ama jilayaasha. Joogitaanka xadka dhexdiisa waa lama huraan. Xitaa waxaa jira kala soocid gaar ah oo buugag ah oo ah tirada ereyada. Xisaabinta ereygu waxay leedahay taariikh dheer oo dhiirigelisa ujeedooyin kala duwan. Laakiin ujeedada bilowga ah ee tiriyadan waxay ahayd in la sameeyo ereyo nooc gaar ah sida kuwa dhif ah, caan ah, waxtar leh, ama ereyo muhiim ah oo leh ujeedada ugu dambeysa ee abuurista qaamuusyo loogu talagalay barista iyo barashada hiddaha, higaada, ama aqriska sida ugu fudud. iyo si hufan oo suurtagal ah.
Waa maxay Wordcounter?
Wordcounter waa aalad fududeysa hawsha tirinta jilayaasha, kelmadaha, jumladaha, baaragaraafyada, iyo bogagga waqtiga dhabta ah, oo ay weheliso naxwaha iyo hubinta hingaadka. Faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah falanqaynta cufnaanta ereyada, halkaas oo aad ka arki karto ereyada aad ugu celcelinayso inta badan qoraalka oo dhan (ku anfacaya inaad sameyso SEO fiican, tusaale ahaan) iyo, gaar ahaan, saacad saacad lagu xakameeyo inta ay soconayso. Waxay kaloo awood u leedahay inay kuu sheegto inta jeer ee ereyada qoraalkaaga lagu celiyo, iyo sidoo kale sameynta laba ama saddex ereyood oo ugu caansan. Ka helitaanka qaababka qoraallada waaweyni way adag tahay in gacanta lagu sameeyo, laakiin kumbuyuutarradu way caawin karaan. Counter Word wuxuu kaa caawinayaa inaad bilowdo falanqaynta qoraalka tiro ahaan laakiin waxay ku tusineysaa ereyada iyo weedhaha ugu badan ee loo adeegsado.
Bogagga internetka ee casriga ah waxay taageeraan tirinta ereyga, waxaana jira qalab fara badan oo kala duwan oo laga heli karo khadka tooska ah, qoraalada qoraalka qaarkood waxay leeyihiin aalad hooyo u ah tirinta ereyada sidoo kale. Waxaa jira kala duwanaan yar iyo xitaa wax ku ool ah natiijooyinka tirinta codadka oo ay soo saareen matoorlada tirinta codadka kaladuwan. Waqtigaan la joogo, ma jiro sharci ama nidaam qeexaya aaladda ama nidaamka loo adeegsan doono tirinta erayga, iyo aalado kala duwan oo loo adeegsado xisaabinta qorshahooda. Qeexida ugu caansan ee ereyga waa "xarfaha ku hareereysan farqiga, kaasoo keenaya waxoogaa macno ah," laakiin barnaamijyo kaladuwan ayaa ku jira macnayaal kala duwan oo ka kooban shaygan keliya.
Xisaabinta hadalka iyadoo la adeegsanayo Microsoft Word
Dadka badankood waxay qoraalkooda ku qortaan Microsoft Word, waana qalabka ugu caansan ee tirinta aaladda. Tirakoobka ereyga Microsoft Microsoft wuxuu tixgeliyaa waxkasta oo u dhexeeya labo boos eray, ha ahaato tiro ama astaan. Dhanka kale, Ereygu kuma daro tirinta ereygiisa tirinta tirooyinka qoraalka sanduuqa qoraalka ama qaababka, taasi waxay mararka qaar dhici kartaa in lagu daro tiro badan oo ereyo ah tirada ereygaaga.
Aaladaha tirinta ereyada gaarka ah
Aaladaha gaarka ah ee tirinta ereygu waa ka saxsan yihiin Microsoft Word. Caadi ahaan, isticmaale ayaa go'aan ka gaari kara inaad rabto inaad tiriso lambarada ama aad kudarto qoraalka ka yimid walxo dheeraad ah ilaa tirakoobka tirinta ereyga Aaladda ugu wanaagsan ee tirinta ereygu badanaa waxay leeyihiin fursadaha tirinta ereyada ee cinwaanada, cagaha, qoraalka, qoraalada, qoraallada qoraalka, qaababka, faallooyinka, qoraalka qarsoon, qoraalka kujira iyo dukumiintiyada ku xiran. Sidoo kale, waxay ku bixin karaan tirinta ereyga tiro badan oo ah qaabab file.
Waxay yiraahdaan sababtoo ah kala duwanaanshahaan awgood ereyga waxaa soo saaray aalado gaar ah oo loo adeegsado tirinta qalabka oo badanaa lagu tiriyaa ereyo / cutub ka badan tirinta erayga Microsoft Word.
Barnaamijyada tirinta ereyada
In kasta oo aysan haysan howlo badan oo ah noocyada desktop-ka, hadana waxaa jira codsiyo guur-guura oo loogu talagalay tirinta ereyada iyo jilayaasha. Arrinta ku saabsan Android, waxaan u adeegsan karnaa "Counter Counter", barnaamij fudud oo keliya oo xisaabaya kelmadaha, jilayaasha leh goobo, xarfo aan lahayn meelo iyo weedho.
Codsiga iPhone xitaa waa mid aad u aasaasi ah, cinwaankiisuna wuxuu uga tegayaa qol yar oo shaki la’aan ah: Muuji eray, dabeecad, ama tuduc tirinta, tanina waa waxa appku sameeyo, waxna kama badna.
Erayada Gaarka ah
Calaamadaha (meel banaan)
Xukunka Ugu Dheer (ereyada)
Xukunka Ugu Gaaban (ereyada)
Avg. Xukunka (ereyada)
Avg. Xukunka (ciil)
Celcelis. dhererka erayga
Waqtiga Qorista Gacanta
Qalabka miiska ereyga tooska ah ee khadka tooska ah (C) Wordcounteronline.net
Waxaan u isticmaalnaa cookies, kaliya si aan ula socono booqashooyinka websaydhkeena, ma keydinno faahfaahin shakhsiyeed.